Gandaki Sanchar » प्रतिनिधीसभा विघाटनअसंवैधानिक कदम हो, खुलेर विरोध गर्नुको विकल्प छैन
मुलुकमा ठुला–ठुला राजनितिक आन्दोलन भए । नेपालको सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन वि.स. २००७ सालको क्रान्तिलाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो । यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा भएको देशव्यापी शसस्त्र क्रान्ति पछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए । ती ती ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्त्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो ।
यो आन्दोलनमा पनि नेपाली जनताले ठुलो बलिदान गर्नुप¥यो ।वि.स २०४६ मा नेपालको जनआन्दोलन बहुदलीय व्यवस्थाको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जसले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो । यो जनआन्दोलनमा विभिन्न राजतिक दलहरू एकै उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यस आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरेका थिए । यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी नेपालीहरूको ठूलो समर्पण रहेको थियो ।
माओवादी पार्टीले वि.स. २०५२ सालमा शशस्त्र विद्रोह शुरु ग¥यो । पूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकार बीच २०५२ सालदेखी २०६३ सम्म चलेको थियो । विद्रोह नेकपा(माओवादीले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देशका साथ यसको सुरुवात गरेको थियो थियो । त्यतिबेला नेपालका १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए ।
जनआन्दोलन २ नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो । यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो । शातिपूर्ण भएपनि यस आन्दोलनमा पनि नेपालका सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
हामीले थुप्रै राजनितिक आन्दोलन ग¥यो ।हजारौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाए सयौँ शहिद भए । अब फेरी एक पटक सम्पूर्ण नेपाली लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरुले गणतन्त्र र लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेकपा सरकारले प्रष्ट दुई तिहाई जनमत पाउँदा पाउँदै पनि आफु विचको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेर प्रतिनिधी सभा विघान गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि भन्दै मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघाटन गरेर निर्वाचन तोक्नुले देशमा फेरी अस्थिरता ल्याउने निश्चित देखिन्छ । यो असंवैधानिक कमदको खुलेर विरोध गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले हामीले प्रतिनिधी सभा विघाटन गर्ने र गराउन बाध्य बनाउने कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन । किनकी प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कार्य लोकतन्त्र माथिको हमाला हो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधीसभा विघाटन समस्याको बोझ ३ करोड जनतालाई बोकाउँदै हुनुहुन्छ । देश कोरोनाको महामारीमा गुज्रिएको अवस्थामा दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै केपी ओलीले निर्वाचन घोषण गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउन खोज्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कमदले मुलुकलाई अझै दश बर्ष पछाडी धकाल्ने निश्चित देखिन्छ ।लेखक नेपाल विद्यार्थी संघ हिमालय मावि खुर्कोटका ईकाई सभापति हुन् ।
प्रकाशित मिति २ माघ २०७७, शुक्रबार ०२:०८